CPP ရေနံကုမ္မဏီမှ တရုတ်တစ်ဦး လည်မျိုအလှီးခံရ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » CPP ရေနံကုမ္မဏီမှ တရုတ်တစ်ဦး လည်မျိုအလှီးခံရ
CPP ရေနံကုမ္မဏီမှ တရုတ်တစ်ဦး လည်မျိုအလှီးခံရ
Posted by NAJA on Mar 21, 2012 in Myanma News, News | 27 comments
ကျောက်ပန်းတောင်းဘက်မှ CPP ရေနံကုမ္မဏီ၏ ရာထူးကြီးပိုင်းမှ တရုတ်အမျိုးသားအား ယနေ့နံနက် လေးနာရီခန့်တွင် ဒေသခံရွာသား တစ်ဦးမှ လည်မျိုအား ပြတ်လုနီးသည်အထိ လှီးဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကြားရပါတယ်… အဆိုပါတရုတ်အမျိုးသားမှာမသေသေးပဲ မန္တလေးသို့နံနက်တွင်ရောက်ရှိလာပြီး အရေးပေါ်အသက်ကယ်ရန်အတွက် အတူလိုက်ပါလာသောသူများမှ ငွေအလုံးအရင်းသုံးပြီး ကြိုးစားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်… ဒီနေ့ည တရုတ်ပြည်ကို ပြန်ရန်အတွက် လေယာဉ်စင်းလုံးငှါးထားတယ်လို့သိရပါတယ်…
အဆိုပါကိစ္စမှာ ဒေသခံများ၏ လယ်မြေများအား သိမ်းယူထားမှုနှင့်ပတ်သက်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်.. ထိုဒေသခံရွာသားမှာလဲ လွတ်မြောက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်…
ဆေးရုံအသိုင်းဝိုင်းမှ ကြားရသမျှဖြစ်ပါတယ်.. အဖြစ်အပျက်ဖြစ်တာတော့ သေချာပါတယ်… အချက်အလက်အသေးစိတ်ကိုတော့ မသိပါ…
ရွာသားများ သတင်းဦးဖတ်စေလိုသောကြောင့် ကြားရသမျှကိုတင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်…
စာသားအရ ကြောင်လေးအမြင် ပြောရရင် မမှန်ကန်တဲ့ တုံ့ပြန်ချက်တစ်ခုပါ။
အဲ့ဒါမှ တရုတ်တွေနည်းနည်းငြိမ်မှာ.. မဟုတ်ရင် ရတာအကုန်ယူနေတာ..
လည်မျို ဆိုရင်တော သေဖိုများတယ်..
ဘာအကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်(ဘာအကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ်).. လူတယောက်က.. လူတဖက်သားကို.. လည်မျိုဓါးနဲ့လှီးတာ(တကယ်ဖြစ်ခဲ့ရင်) ..မလုပ်ရပါဘူး..
တည်ဆဲဥပဒေအရ ပြင်းပြင်းထန်ထန်( ပြင်းပြင်းထန်ထန်)အရေးယူသင့်ပါကြောင်း…။
it’s had lines.
Don’t makeamountain ofamole hill.
တရုတ် က ဘယ်လောက် အတိုင်းအတာ အထိ မတရားလုပ်ထားသလဲ မှ မသိတာ ..၊
သေချာ သိသူတွေ ပြောကြစေချင်ပါတယ် ..၊
စိတ်ဝင်စားစရာ သတင်းထူးပါ ..၊
လည် ပြတ်လုနီးနီး ဆိုပြီး ဘာလို့ အသက်ရှင်နေရသေးတာလဲ …??
ကတောက်… ! နာသယ်ကွာ….။ မသေသေးဘူးလား။
ဘယ်ဂလောက်တောင် စိတ်နာအောင်လုပ်ထားလဲမှ မသိတာ။ ခွေးတောင် ချောင်ပိတ်ရိုက်ရင် ပြန်ကိုက်သေးတယ်။ ဟွန့်…။
လည်ပင်းပြတ်လုနီးပါးအထိတော့ ဖြစ်နိုင်ပါဘူးကွယ်။ တင်စားပြောတာ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ ဒဏ်ရာအတော်ကြီး အတော်နက်ပိုရမယ်ထင်၏။ သူတပါး ဒုက္ခရောက်တာ ဝမ်းမသာကောင်းဘူးကွဲ့… သို့သော်ပေ့ါလေ… ကြည့်လုပ်ကြ ကြည့်လုပ်ကြဟေ့….။
သဂျီးမင်းတရားကြီးရဲ့ အာဘော်ကို နည်းနည်းလေး
ဆဲခဲ့တာတွေ အားလုံး ဒီကွန်မန့် နဲ့ တင်ကျေသွား တယ်။
ူlike , plus and welcome for your comment.
သိချင်တာ လေး ဆွေနွေးရရင် တော့ ဒေသခံ လူ က တရားဥပဒေ နဲ့ ဖြေရှင်း ရင် မနိုင် မှာ သေချာ လို့ ခု လို လုပ်တာလား မသိဘူးနော်။
ဖြစ်ရပ်မှန်ဆို ရင်တော့ တော်တော် နာကျည်း လို့ နေမှာပဲ။
လည်မျိုကိုလှီးရလောက်အောင်ဆိုရင်တော့ သူ့ဒေါသကိုမြင်နေရတယ်။ တော်တော်ကိုမခံမရပ်နိုင်ဖြစ်လို့နေ မှာ။ တောသူတောင်သားတွေရဲ့ ဒုတ်တပျက်ဓါးတပျက် ရှင်းတတ်တဲ့အကျင့်က ဒီအဖြစ်မှာတော့ နောက် ဆက်တွဲ မကောင်းနိုင်ဘူးမှတ်တာပဲ။ တရုတ်တွေကိုသွားထိတာကိုး။ သူတို့ကအခုလောလောဆယ်ဆယ် အပြစ်ရှာနေကြတာဆိုတော့ သူ့နားအီးပေါက်မိရင်တောင် လေထုညစ်ညမ်းစေမှု့နဲ့ တရားစွဲမှာဆိုတော့ ဒီကိတ်စကမလွယ်လောက်ဘူး။ အဲဒီတရုတ်မသေပါစေနဲ့ဆုတောင်းရမှာပဲ။ ချစ်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး။
ဆရာစံ တို့ ခေတ်က ကုလားလူမျိုး..ဒီခေတ် မှာတော့ တရုတ်…တူတာကတော့ တို့မြန်မာတွေရဲ့ သတ္တိသွေး ကတော့ ခေတ်အဆက်ဆက် ရဲသွေးနီဆဲပါဘဲ..တိုင်းတစ်ပါးသား တွေကို သာအလေးထား အရေးပေးတဲ့ အစိုးရ အုပ်ချုပ်နေဆဲ
ဒီပြည်မှာက တရားဥပဒေစိုးမိုးမှု့ နဲ့ လွတ်လပ်မျှတတဲ့
ဒါကြောင့် ကိုယ့်နည်းကိုယ့်ဟန်နဲ့ လားပင်စင်ပေးတာထင်ပါရဲ့
တကယ် ဟုတ်ရင်တော့ နာကျည်းလို့ဒီလိုလုပ်တာဖြစ်မှာပေါ့။
နိုင်ငံခြားသားနဲ့အမှူဖြစ်ရင် ဘာအမှူဖြစ်ဖြစ် မိမိနိုင်ငံသားကို သက်ညှာစွာ စဉ်းစားပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်။
အဲ့ဒီတရုတ် မသေပါဘူးတဲ့ဗျာ၊ ခိုင်လုံတဲ့သတင်းရပ်ကွက်ကရရှိထားတာပါ။
တရုတ်ပြည်ကိုပြန်သယ်သွားဖို့လုပ်တာ ၊ လေယာဉ်ပေါ်မှာ အသက်မရှူနိုင်မှာကြောက်လို့ လေယာဉ်နဲ့ မသယ်ဖြစ်သေးဘဲ မန်းလေးဆေးရုံကြီးပေါ်မှာ စန့်စန့်ကြီးတဲ့။
ဖြစ်ပုံက အဲ့ဒီတရုတ်က လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာ မောက်မာရိုင်းစိုင်းလို့ မခံနိုင်တဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်က လည်မြိုကို ဓားနဲ့ထိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်နက်တယ်တဲ့။လည်ပင်းပြတ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဗျာ။
မှတ်ပီလားကွ ….။ မြန်မာကွ အဲဒါမြန်မာကွ….။ ဒီအကောင်တွေ နေရာတစ်ကာလူတွင်ကျယ်လုပ်တဲ့ကောင်တွေ…။ များများသာလုပ်…။ အဲဒိစီမံကိန်းတွေပျက်လေကောင်းလေ….။
ချိုင်းနားပြည်မထဲရောက်နေတဲ့.. မြန်မာတွေ.. ကချင်ပြောင်းခိုသူတွေ.. သိန်ဂဏန်းကြီးအတွက်.. ရင်လေးမိတယ်..။
လူသားများအနေနဲ့ သဘောထားပြီး တရားရေးကမှန်မှန်ကန်ကန် ဆုံးဖြတ်ပေးဖို့ ထပ်ပြီးတိုက်တွန်းပါတယ်ခင်ဗျား..။ :?
အမှန်တရားကို ကြာကြာဖုံးကွယ်ထားလို့ မရပါဘူး။
ပြည်ပကလာပြီး လူတွင်ကျယ်တွေ လာလုပ်ကြတယ်လေ။ သူတို့နိုင်ငံမှာတောင် မရတဲ့အခွင့်အရေး၊ အခွင့်ထူးခံ ခံစားခွင့်တွေနဲ့ လာပြီး အုပ်ချုပ်ကြတော့ ဖြစ်ပြီပေါ့။
အရင်းအမြစ်က ဒေါသ .. ဒေါသ ..
ဘလိုင်းကြီးတော့ ထခုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဘ၀ ယိမ်းယိုင်လောက်အောင် သွားလုပ်လို့ဖြစ်မယ်။ လယ်လေးနဲ့ပဲထမင်းစားနေရတာ ဒါကိုယူတော့ ခုပ်ပြီပေါ့ဗျ။ အစိုးရအနေနဲ့ ပြည်သူတွေမနစ်နာအောင်စောင့်ရှောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
သဂျီးကတော့ … အတော်အမျိုးချစ်တတ်တာပဲနော် ….. ဟိဟိ
အခုလို အလုပ်ခံရတော့ .. တရားဥပဒေတွေ ဘာတွေ လာပြောနေတယ် … ။ လူမသိသူမသိ ..သူတို့အနိုင်ကျင့်၊ ဗိုလ်ကျလို့ … ဘ၀ပျက် ၊ စီးပွားပျက်သွားရတဲ့ လူတွေအတွက်ရော ဘယ်မှာလဲ တရားဥပဒေ … ။ ဟိုအတ္တကြီးတဲ့ကောင်တွေ .. သူတို့ ပထွေးကို မျက်နှာလို မျက်နှာရ မြှောက်ပင့်ထားလို့… ဒီနိုင်ငံမှာ သူတို့ လုပ်ကွက်ရနေတာ … ။ ပြောရင်းတောင် ချဉ်တယ် … ဖွီ :mad:
ကိုယ့်နိုင်ငံတွင်းမှာ နေပြီး …နိုင်ငံခြားသားတွေ အနိုင်ကျင့်ခံရတာ ကြာတော့လည်း ပေါက်ကွဲမိမှာပေါ့လေ .. ဒီဖြစ်ရပ်က အနိုင်ကျင့်လို့ ရတဲ့ .. နမူနာတစ်ခုအနေနဲ့ … မှတ်ယူလျှင် သိပ်ကောင်းမှာပါပဲ … … သို့သော်လည်း… စိတ်မထိန်းနိုင်လို့ လုပ်လိုက်တဲ့ .. နိုင်ငံသား အတွက်တော့ …. စိတ်မကောင်းပါဘူး … ။
ဟိုတရုတ် က ဘယ်လောက်တောင် လူပါးဝသလဲမှ မသိတာ။ဟိုတခါမြစ်ဆုံ ရပ်သလို ဖြစ်သွားတုံး က တရုတ်တွေ မြန်မာ ကို အကြွေးတွေ အတိုးဘယ်လောက်တင်ပြီးတောင်းလိုက်လဲမသိဘူး။ဦးရွှေမန်း တရုတ်ကို သွားတယ်။သူပြန်လာတော့မြစ်ဆုံးကိစ္စပြန်လှုပ်လာတယ်။တခြားစီမံကိန်းတွေလဲတိုးလာတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ မြစ်ချောင်းတွေက တရုတ်အတွက် သန်းရွှေက သတ်မှတ်ခဲ့သလားမသိ။
သတင်းအတိအကျရရင် ထပ်ရေးပေးပါနော် သတင်းကောင်းတော့မဟုတ်ပေမယ့် သိချင်လို့ပါနော်
အသူရာ ပြောတာ မှန်ပါတယ်. အဲ့ဒီ့ တရုတ်မသေပါဘူးလေယာဉ် နဲ. မသယ်နိုင်လို့ ဆေးရုံကြီးမှာ စန့်စန့်ကြီး စံမြန်းပြီးနောက် (၂၂)ရက်နေ့က ဂျက်လေယာဉ်ငှားပြီး ပြန်သယ်သွားပါတယ်.
အဲ့ဒီတရုတ်က လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်မှာ မောက်မာရိုင်းစိုင်းလို့ မခံနိုင်တဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်က လည်မြိုကို ဓားနဲ့ထိုးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ် .. တော်တော်ကို မောက်မာတယ်လို့ ..ထို တရုတ်ရဲ့ လက်အောက်က တရုတ်ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ကိုယ်တိုင် ပြောသွားခဲ့တယ်
Ma Tel Nu Aye ရေ တရုတ်ကိုဒီလောက်တောင်ကြောက်နေဖို့မလိုပါဘူး… အကျိုးရှိလို့အကြောင်းရှိတာနေ
မှာပါ…မြန်မာနိုင်ငံမှာ တရုတ်တွေလူပါးဝနေတာ တော်တော်ကြာနေပါပြီ… ဒါမျိုး တခါလောက်ဖြစ်မှ နောင်
ကျဉ်သွားမှာ …မဟုတ်ရင် ကိုယ့်မြေပေါ်မှာလာပြီး ဘူဇွာလုပ်နေကြာတာ